Nezvedu - Shenzhen Yurucheng Dental Material CO., LTD
YUCERA ine yakasimba timu yehunyanzvi timu, 60% yenhengo dzayo inyanzvi dzehunyanzvi hwezvipenyu uye nyanzvi dzeCCC dzakangwara. Zvakare, YUCERA inoshanda pamwe neakawanda anozivikanwa Chinese maInstitute ekuunza epamberi yekugadzira tekinoroji kubva kumba nekune dzimwe nyika.
Kubatana Kwenyika Dzepasi Pose
Yurucheng inosimbisa kubatana pamwe neakawanda makuru mazino ekugadzirisa denture uye zvipatara zvemumuromo, vanowana mashandiro akanaka mumunda uye vawane mukurumbira wakanaka wevanamakanika nevarwere.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezve ceramic denture zirconia block, inoenderana neCAD / CAM michina, 3D michina yekudhinda uye zvimwe zvinoenderana nemazino zvigadzirwa. Sevashandi vehunyanzvi zvekushandisa zvemumuromo, isu tinogona kupa zvemadhijitari zvemazino zvinhu, zvemazino zvishandiso, uye izere huwandu hwezvigadzirwa zvemadhijitari uye masevhisi.
Kuvandudza Masoko eGlobal, isu takazvipira kukudziridza kuita rakanakisa mhando yemazino zvinhu zvemadhijitari zvemazino zvigadzirwa.
Kubudirira kwedu kwakatangira mukuneta kutsvaga uye nekumisikidza hunyanzvi.
2. Takatodarika CE uye ISO certification.
Gamuchira chero zvataurwa.
Kurovedza inzira yepakati yenhengo dzese uye isu ticha kuronga akasiyana ekudzidzisa kutibatsira kuvandudza kugona kwedu uye Ngatitsvagei runako rwehupenyu. Tinokoshesa nguva yatiri kudzidza nekudzidza pamwe chete.